सोयाबिन स्वास्थ्यको लागि निकै फाइदाजनक - LiveMandu
सोयाबिन स्वास्थ्यको लागि निकै फाइदाजनक
by Subash Bhandari
हरियो भट्ट जसमा दाना राम्रोसँग बिकास भएको हुन्छ, त्यसलाई हामी उमालेर खाने गर्दछौ । केराऊ जस्तै भट्ट पनि निकै स्वादिष्ट र स्वास्थ्यको लागि निकै लाभदायक हुन्छ । आउनुहोस, सोयाबिनको फाइदाहरुको बारेमा चर्चा गरौ :
१) सोयाबीनको सहि प्रयोगले दिमागको लागि आवश्यक पोषण प्रदान गर्दछ । एक अनुसन्धान अनुसार सोयाविनको प्रयोग गर्ने व्यक्तिहरुमा मानसिक रोगको संम्भावना निकै कम हुन्छ ।
२) प्रोटिनले भरिपुर्ण हरियो भट्ट खानाले एलडीएल कोलेस्ट्रोलको स्तर कम गर्न मद्दत गर्दछ, यसलाई हानिकारक कोलेस्ट्रोलमा मानिन्छ । हरियो भट्टले हाई ब्लडप्रेशर र ह्दयघातको समस्याबाट बचाउन समेत महत्वपुर्ण हुन्छ ।
३) तपाईलाई यो सुनेर अनौठो लाग्ला कि सोयाबिनको प्रयोगले तपाईको बे्रस्ट क्यान्सर र प्रोटेस्ट क्यान्सरबाट समेत बचाउन सक्छ । भट्टमा क्यान्सरका कोषिकाहरुलाई नष्ट गर्ने र ट्युमर बढ्नबाट रोक्न उपयोगी हुन्छ ।
४) टाइप २ डाइबिटिजको बिरामीको लागि हरियो भट्ट निकै फाइदाजनक हुन्छ । टाइप २ डाइबिटिजका रोगीहरुमा किडनीको समस्या हुन सक्छ, तर सोयाबीन तपाईको खानामा समावेश भएमा किडनीको समस्याबाट बच्न सकिन्छ ।
५) गर्भाअवस्थामा शरिरको सामान्य देखि धेरै आइरनको आवश्यकता पर्दछ, साथै फाँलिक एसिड पनि आवश्यक हुन्छ । यो वस्तुहरु सोयाबिनमा प्राकृतिक रुपमा पाउन सकिन्छ ।
Tags: सोयाबिन स्वास्थ्यको लागि निकै फाइदाजनक
यसरी बढाउनुहोस् पाचन क्षमता
के तपाइँलाइ मानिसका अगाडी बोल्न नसक्ने समस्या छ ? यस्तो डा. कल्याणको सुझाव
अझै पनि ५२ प्रतिसत गर्भपतन असुरक्षित
पूर्वमा ५ जना डेंगुका विरामी फेला, सर्तकता अपनाउन डाक्टरको सल्लाह
जिपि अध्ययनकेन्द्रको कार्यसमिति गठन
वालिङ माउण्टेन बाईक प्रतियोगिता माघमा हुने
बन्दनाले नाचेरै विश्व कृतिमान